A na-akpọ oku ọhụrụ maka ogbako White House na nri
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » A na-akpọ oku ọhụrụ maka ogbako White House na nri
Ụlọ akwụkwọ Academy of Nutrition and Dietetics na-ekele US Rep. Jim McGovern (Mass.) na US Sen. Cory Booker (NJ) maka ịkwado mbọ ndị omebe iwu iji kpokọta ogbako White House nke mba lekwasịrị anya na nri, nri, agụụ na ahụike.
"Ụlọ akwụkwọ mmuta ahụ na-agba ndị Congress ume ka ha gbakwunye nkwado ya na ụgwọ nke abụọ, bicameral. Ọgbakọ a ga-abụ nzọụkwụ a na-achọsi ike iji gboo agụụ na nri na-edozi ahụ na United States, "ka onye na-ahụ maka nri nri na onye isi oche Academy Kevin L. Sauer kwuru.
Sauer kwuru, "O meela ihe karịrị ọkara narị afọ kemgbe White House kpọkọtara ogbako a raara nye maka okwu ndị a dị mkpa." "Taa, anyị ga-arụkọ ọrụ ọnụ iji mepụta usoro ọgbara ọhụrụ maka enweghị nri na nri na-edozi ahụ iji hụ na ezinaụlọ ga-enweta nri na-edozi ahụ, na-edozi ahụ."
N'afọ 1969, ogbako mbụ na naanị White House gbasara nri, nri, agụụ na ahụike, na-eduga na itinye ego dị ukwuu maka imepụta na mgbasawanye nke mmemme ọtụtụ nde ndị America ka na-adabere na taa, gụnyere Mmemme Enyemaka Nutrition Nutrition, Nri Nri Pụrụ Iche. Mmemme maka ụmụ nwanyị, ụmụ ọhụrụ na ụmụaka na mmemme nri ụtụtụ na nri ehihie nke ụlọ akwụkwọ mba.
N'ịgbaso ncheta 50th nke ogbako mbụ, Ụlọ Akwụkwọ Academy sonyeere òtù ndị ọzọ na-akpọ maka ogbako ọzọ.
"Nri na-edozi ahụ na-arụ ọrụ dị mkpa na ọkwa ọ bụla nke ndụ ma na-akwado ahụike, ịdị mma na mma ndụ. Ụlọ akwụkwọ Academy bụ onye na-akwado mpako nke atumatu na-eme ka ahụike dịkwuo mma ma belata ụkọ nri na United States na n'ọtụtụ ụwa, "Sauer kwuru.